होटललाई विद्युत महसुल बुझाउन ताकेता - Arthapage
होटललाई विद्युत महसुल बुझाउन ताकेता
प्रकाशित मितिः June 27, 2020 June 27, 2020
नेपालगन्ज १३ असार : होटल व्यवसाय कोरोना (कोभिड–१९) बाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र बनेको छ । अन्य उद्योग, व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किन खोज्दै गर्दा होटल एवं रेष्टुरेन्टका गेटमा भने ताला झुण्डिएको छ । अब ताला कहिले खुल्ने हो ? कुनै निश्चित छैन ।
अनिश्चयको भूमरीमा रुमल्लिएका होटल व्यवसायीलाई बैंकको ऋण, कर र बिद्युतको महसुल तिर्न भने सरोकारवाला निकायबाट पटक–पटक ताकेता भइरहँदा कटक्क मन खाएको छ ।
नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको एक तारे होटलका सन्चालक भन्छन्–‘तीन महिना भयो होटलको गेटमा ताला झुण्डिएको ! तर बैंकदेखि सरकारी निकायले त्यति कुरा थाहा पाएर पनि नपाएझैं गरिरहेका छन् ।’ केन्द्रबाट स्पष्ट राहतका कार्यक्रम नआएका कारण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले ताकेता पठाइरहेका छन् । त्यसैले होटल व्यवसायीहरु यहाँका सरकारी हाकिमसंग होइन सरकार चलाउनेहरुसंग रुष्ट छन् ।
‘कोरोनाले गर्दा हस्पिटालिटी क्षेत्रको बिजनेश त अहिले पुरै ध्वस्त भएको छ । सरकारबाट राहत दिएर माथि उकास्नु त कता हो कता उल्टो घाउमा नुन छर्किने काम भयो ।’–अधिकांस व्यवसायीको गुनासो सुनिन्छ । नेपालगन्जकै हकमा भन्ने हो भने बिद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले यहाँका तारे देखि अन्य होटल सन्चालकलाई फोन गरेर महसुल बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
होटल व्यवसायीले भने लकडाउन जारी रहेको र होटल सन्चालन नभएको अवस्थामा महसुल बुझाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराउँदै छन् । प्राधिकरण स्रोतले भने राजश्व संकलन प्रभावित भएको अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई महसुल बुझाउन आग्रह गरिएको बताइएको छ ।
प्रकाशित मितिः 12:20:09 PM |
Prevत्रिभुवनचोक बैंक ठगी प्रकरण : किर्ते कागजात बनाउन को–को संलग्न ?
Nextएकल महिलालाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट बाख्रा सहयोग